Ny sisintany tsy hita maso eo anelanelan’i Ekoatora sy Kolombia · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Ela Stapley
Voadika ny 28 Septambra 2010 3:59 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Italiano, srpski, 한국어, македонски, বাংলা, Español
Olana maha-be resaka indray izao ny sisintany eo amin'i Ekoatora sy Kolombia. Ny firenena roa tonta dia manana sisintany mahatratra 586 km (tokotokony ho 365 miles) ary miaraka amin'izay koa ny tantaran'ny fifandirana, ny fifanamelohana avy amin'ny andaniny na ny ankilany sy ny tatitra momba ny fifandonana ara-tafika ary ny famindran-toerana ny mponina. Ny fahafatesan'i Raúl Reyes, mpikambana iray tao amin'ny vondrona mpanao ady anaty akata Kolombiana FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia), angamba no tena ady sisintany isan'ny nalaza indrindra. Maty tany amin'ny tanin-dry zareo Ekoatoriana nandritra ny fanafihana ny tobin'ny FARC tao Angostura tamin'ny Martsa 2008 i Reyes, araka ny fampahatsiahivan'i bc10 [es]. Mbola olana hafa mikasika ny ady sisintany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy horohoro, hoy i El radar de la frontera [es] mitatitra. Ny blaogy La Historia del Día [es] dia mitatitra fa ireo heloka bevava mitranga ao amin'ilay faritra dia tanterahana ao anatina tontolo tsy tan-dalàna.
Hatramin'ny Sabotsy 19 Septambra, be ny mpikirakira Twitter users sy ireo fantsom-baovao avy amin'ny firenena roa tonta no nanambara, miaraka amina antontan'isa tsy mitovy, ny isan'ireo maty tamin'ny ady farany tao amin'ny sisintany izay nahitana fahafatesana mpikambana tao amin'ny FARC maty nandritra ny fanafihana nataon'ny tafika Kolombiana, raha ny filazan'ny infobae.com [es]: “Tafakatra any amin'ny 60 any ny mpanao ady anaty akata maty tao amin'ny sisntany manasaraka an'i Ekoatora sy Kolombia.
Ny fanehoan-kevitra avy amin'ny ankilany Ekoatoriana dia mifanipaka amin'izay. Be ireo mpampiasa Twitter no namaly tamin'ny fomba henjana ny fiheverana fa hoe tsy nanampy ny tafika Kolombiana i Ekoatora, araka izay hita ao amin'ny rohy iray nalefan’ i Douglas Weber (@HCJBVozAndes)
Mamerima milaza i Ekoatora fa tsy tafiditra velively amin'ny adin’ Kolombia. http://bit.ly/9aPjSg
Avy any Kolombi, Hely Rojas (@sysmaya) dia mitatitra hoe:
Tsy nisy zava-baovao notaterin'i Ekoatora momba ny sisintany ary milaza izy fa tsy nanohana ny hetsika Kolombiana. http://bit.ly/coQiRY
Luis Alonso Lugo [es] dia mametraka mazava tsara ny toeran'i Ekoatora avy amin'ny teny nataon'ny Minisitry ny Fiarovana ao Ekoatora, Javier Ponce Cevallos. Cevallos dia nangataka an'i Etazonia mba hiara-hiasa amin'i Kolombia ho fiarovana ny sisintany manasaraka an'i Kolombia sy Ekoatora. Milaza i Alonso Lugo says, “Ponce nanazava fa tena zava-dehibe ny fiaraha-miasan'i Kolombia noho ny ‘vesatra goavana’ mety hapetrak'io eo an-tsorok'i Ekoatora handaniana 100 tapitrisa dolara isan-taona hanaramana miaramila miisa 10.000, ‘ampahatelon'ny olona ampiasainy’, any amin'ny sisintany manasaraka ny firenena roa tonta, izay onenan'ireo mpitsoa-ponenana manodidina ny 140.000 noho ny korontana Kolombiana.”
Ilay sisintany tsy hita maso: herisetra sy famindràn-toerana
Maro ny zavatra aterak'ity fifandirana momba ny resaka sisintany ity, fa ny tena lehibe indrindra dia ny nametrahana faritra tsy azo itsahana (no man’s land). Ny bilaogy periodismodefrontera [es] (Fanaovan-gazety tsy misy sisintany) dia mitatitra:
Fanadihadiana iray mikasika ireo olan'ny sisintany avaratra ary nisongadina tanatina resadresaka sy atrikasa tany amin'ny faritany Ekoatoriana telo, Carchi, Sucumbíos ary Esmeraldas, no nampibaribary ireo olana saropady izay, mazàna, tsy tafiditra anaty fandrakofan'ireo gazety, nefa ny vokany dia miantraika eo amin'ny fivoarana ara-tsosialin'ny vondrom-piarahamonina. Raisinay ho fototra iaingana amin'izany ny zava-mitranga any amin'ny sisintany avaratra mifandraika amin'ny fomba fitondrana ny ankizy, indrindra indrindra mikasika olana roa goavana be; ny fampiasàana ankizy sy ny fanondranana ankizy an-tsokosoko handeha hiasa na hivaro-tena.
"Hetsika iraisana firenena roa nataona vehivavy manohitra ny ady. Sisintany Kolombia-Ekoatora." Sary avy amin'ilay mpampiasa flickr ampiasana ny Attribution-ShareAlike 2.0 Generic Creative Commons license
Isan-kerinandro dia fianakaviana Kolombiana 50 no, na mandositra ny herisetra, na miaro ny zanak'izy ireo tsy ho lasan'ireo vondrona mitam-piadiana, hoy i Luis Varese, tale mpanampy ao amin'ny Biraon'ny Firenena Mikambana momba ny Mpitsoa-ponenana, Quito, Ecuador [es], izay niampanga ny “fikombonam-bava”:“ Maka an-keriny ireo ankizilahy manomboka amin'ny faha 12 taonany ry zareo, ary ny ankizivavy kosa atao “loka noho ny ady natao” ampiasaina ho toy ny endrika vola na tolotra amin'ny resaka firaisana ara-nofo. Ireo olona teratany, noho ny fahalalany tsara ny faritra, dia tena ilaina ihany koa.”
Ciudadanía Informada [es] mitatitra fa ireo zaza manana ray aman-dreny avy amin'ireo firenena roa ireo dia tsy manan-jo hizaka zom-pirenena na avy amin'ny firenena andaniny, na avy amin'ny ankilany. Natalio Carrasco ao amin'ny bilaogy Cuaderno de Terreno [es], nametraka rohy mankany amin'ny UNICEF, nilaza fa ireo ankizy tafasaraka na tsy arahan'ny ray aman-drenin'izy ireo Kolombiana dia nifindra na nitady fialokafofana any Ekoatora mba hialàna amin'ny fanafihana na ny fakàna ankeriny ataon'ireo andian'olona mpihoko. Ny sasany dia nahita ny famonoana ny olon'ny fianakaviany.
Azo eritreretina fa ny zava-niainan'ireny ankizy ireny dia hanamarika lalina tokoa ny fivelarany na izany ara-batana na koa ara-tsaina. Ankizivavy, tanora ary vehivavy sy tonga hatramin'ny lehilahy sasantsasany aza no iharan-doza noho ny fanaovana ankeriny sy latsaka eo am-pelatanan'ireo mpanondrana olona an-tsokosoko.
Ny fikambanana'ireo olona teratany sy tambanivohitra dia mitatitra ao amin'ny Voltaire [es]:
Ny sasany aminay izay monina any amin'ny sisintany avaratr'i Ekoatora dia avy amina faritra tena mahantra tokoa ao Kolombia sy Ekoatora. Tena nilàna ezaka sy fiaretana goavana be tokoa vao tonga eto amin'ity toerana ity izay antenainay fa hitondra andro mamiratra ho an'ny taranakay. Ireo rahalahinay Kolombiana koa dia miaritra zavatra tsy mifanalavitra amin'izao. Ny sasany aminay izay monina any amin'ny sisintany avaratr'i Ekoatora ary any atsimon'i Kolombia dia mahita foana ny maha-olom-pirenena sy ny zo maha-olombelona anay, izay hitana ao anatin'ny lalampanorenana ankehitriny na any anatin'ireo fifanekena iraisam-pirenena nankatoavin'i Ekoatora, voahosihosy noho ny hoe satria izahay monina fotsiny any amin'ny sisintany.
Izany fijery izany dia namafisin'ny Servindi [es] izay nitatitra momba ny nahafaty an'ilay mpitarika teratany Ramiro Inampues sy ny vadiny, María Lina Galíndez izay , “nisy namono tamin'ny 28 Aogositra tany amin'ny tanana iray faritra ambanivohitr'i Guachucal, manakaiky ny sisintanin'i Ekatora.”
Pio [es] manazava momba ilay fifandirana apo amin'ny seha-pifanakalozan-dresaky ny tranonkala La Silla Vacía, izay ifanakalozan'ireo mpifanerasera hevitra mikasika ny olana entin'ny fananganana ny El Corredor Sur [es], tetikasa fanamboaran-dàlana ikendrena ny hampifandraisana ny firenena roa tonta nefa hitera-doza ho an'ireo mponina hatrizay ao an-toerana.
Ilaina ny hanasongadinana fa tsy ry zareo Kofanes ihany fotsiny no iharan-doza amin'ity tetikasa ity. Ao koa ny Macaguajes (izay 50 sisa no sisam-paty), Sionas, Coregüajes ary raha tsy misy ny sampona dia ny Ingas ao Bajo Putumayo. Izy rehetra ireny no masoivohon'ny kolontsaina Ayahuasquera sy ny lovan-tsofina ara-panahy.